Dowladda Itoobiya oo si rasmi ah ugu dhawaaqday inay xukun deg deg ah gelisay dalkeeda (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Dowladda Itoobiya oo si rasmi ah ugu dhawaaqday inay xukun deg deg ah gelisay dalkeeda (SAWIRO)
Ra’iisul wasaaraha dalka Itoobiya Hailemariam Desalegn ayaa maanta ku dhawaaqay in dalkiisa lagu soo rogay xukun deg-deg ah, kadib, markii ay labadii bilood ee lasoo dhaafay dalkaasi ka dhaceen dibadbaxyo dowladda looga soo horjeedo.
Dibadbaxyadda ugu balaaran ee looga soo horjeedo dowladda ayaa waxay ka dhaceen deegaanadda ay ku xooggan yihiin qowmiyadda Oromiya, kuwaasi oo kacdoon xooggan kala soo horjeedo dowladda federalka ee Itoobiya.
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Hailemariam Desalegn oo ka hadlay teleefishinka dowladda Itoobiya ayaa sheegay in sababta xukunka deg-dega ah loo soo rogay ay tahay, sidii looga hortagi lahaa xaaladda cabsidda ah ee ka dhanka ah dadka iyo dalka Itoobiya.
Warbaahinta gudaha ee dalka Itoobiya ayaa sheegtay in xukunka deg-dega ah uu socon doono muddo 6 bilood ah, waana markii ugu horeeysay ee xukun deg-deg ah lagu soo roggo dalkaasi muddo 25-sano laga joogo.
Sidoo kale warbaahinta dowladda Itoobiya ayaa mar sii horeeysay ee maanta sheegtay in xukunka deg-dega ah looga dan leeyahay in laga hortago kooxaha kasoo horjeeda nabadda ee isbaheysiga la leh ciidamo shisheeye, kuwaasi oo carqaladeynayo nabadda iyo ammaanka Itoobiya.
Dibadbaxyadda looga soo horjeedo dowladda Itoobiya ayaa waxay bishii November ka bilawdeen kooxaha kasoo jeeda qowmiyadda Oromo oo ah qabiilka labaad ee ugu tirada badan qabaa’iladda ku nool dalkaasi Itoobiya.
Dhinaca kale, ciidanka ammaanka ee dowladda Itoobiya ayaa la sheegay inay ugu yaraan 500 qof ku dileen tan iyo markii ay dibadbaxyadda bilawdeen bishii November ee sanadkii hore.
Ugu dambeyntii, dibadbax kale oo bishaan October 2-deedii ka dhacay gobolka Oramiya ayaa ciidanka ammaanka ee dalkaasi Itoobiya waxay ku dileen in ka badan 100 qof, inkastoo ay dowladdu sheegtay in rabshadahaasi lagu dilay 55 qof.